Home Wararka Maciishada qutul daruuriga muqdisho oo sare ukacday
Maciishada qutul daruuriga muqdisho oo sare ukacday
Todobaadyadii u dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayey noocyada kala duwan ee maciishada dalka, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Sunkarta, Burka, Bariiska, Baastada iyo noocyada kale ee cunnada qutul daruuriga ah ayaa cirka isku dhareertay, intii lagu guda jiray sanadkan bilaawga ah ee 2021-ka.
Idaacadda Kulmiye ayaa u kuur gashay sara u kaca ku yimid cunnada qurul daruuriga ah ee dalka, waxaana makarafoonka la dhex qaadnay dadweynaha ku ganacsanaya suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho.
Waa kuwaan qaar ka mid ah mulkiilayaasha ay u soo degaan noocyada kala duwan ee raashinka, oo nooga warbiyey sababta ay u maleynayaan inay keentay sara u kacaan.
Sidoo kale waxaa nala hadlay qaar kamid ah shacabkii ka dukaameysanayey suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho, waxayna dowladda iyo ganacsatada waaweyn ee dalka ka codsadeen in hoos loo eego dadka danyarta ah ee aan awoodin sara-u-kacaan ku yimid maciishada qutul daruuriga ah.
Ardayda Somaliland oo maanta u fariisanaysa Imtixaanka Shahaadiga
Duqa magalaada Garowe oo amar dul dhigay xolaaha ku dayacan magalaada